Sei uchifanira kuwana CISSP Certification?
Unoda kuwana chiziviso cheCISSP, asi kwete kunyatsoziva nezvemigumisiro inogona kuva nayo mubasa rako roupenzi? Zvakanaka! Iwe wakangosvika panzvimbo yakarurama! Tichakuudza zvikonzero zvepamusoro zvekuti nei uchiwana chiziviso cheCISSP.
Chii chinonzi CISSP certification?
Sei uchiwana CISSP Certification?
Ndeupi Murairo Wemihoro weCISSP unyanzvi hwakavimbiswa?
CISSP inotsanangurwa neChittified Information Systems Security Professional. CISSP inotungamirira inochengetedzwa kwekuchengeteka kweTI yakagadzirwa neInternational Information Systems Security Certification Consortium (ISC2). ISC2 inhengo isiri purogiramu iyo inonyanya kujekesa iyo IT kuchengetedzwa kwenyika yose. ISC2 inoshandisa Mutumbi Wechizivo Wechizivo (CBK) wekuchengeteka kwekombiyuta uye inopa humwe humwe hutsika hunozivikanwa hutsika hweT IT.
CISSP iri yepamusoro yevhisi yepamusoro yakagadzirirwa vane ruzivo rwehutano hwehutano hwehutano avo vane unyanzvi hwakavimbiswa mukugadzirisa ruzivo rwekuchengetedza kwemaitiro emabhizimisi. Kuwana chikwata cheCISSP chiyeuchidzo kubva kunzvimbo yakarongeka, yakadai seITS Tech School, iyo yakagamuchirwa neASC2, inopa hukuru hwekudzidza uye inowedzera mikana yekugadziriswa yekubvisa kuongorora kweCISSP.
Iko kune zvisingaverengeki zvinobatsira zvekuwana a CISSP certification. Pano tinonyora mazita ekutanga e5 anoita kuti CISSP izivikanwe:
Kuwedzerwa kuda kwe Information Information Professionals: Munyika yose, zviitiko zvekuputsa mukuchengeteka kwemashoko zvakamanikidza kuwedzera kwekushandiswa kwemasangano pane kuchengetedzwa kweT. Yakaparadzanisa mari yehuwandu hwekugoverwa kunyanya kwekuchengetedzwa kweT IT, zvinoreva kuti kune kuwedzera kwekubhadhara kwevanodzidza vashandi.
Wide Care Scope: Chiremba anozivikanwa neCISSP ane kodzero yekubata zvakasiyana-siyana zvakasiyana-siyana zvekutyisidzira kwekunyora nekurwisa, zvichiita kuti munhu wacho ave nounyanzvi uye anoziva. Hapana hupfumi hwemabasa kune unyanzvi akadaro uyo anogona kutarisira huwandu hwe cyber chibatiso unyanzvi, hunosanganisira - Asset Security, Software Security, Network Security, Incident Management uye Dambudziko Recovery pakati pevamwe vakawanda.
Chiratidzo chinowedzera Kuziva kune unyanzvi:A CISSP yakavimbiswa mumwe munhu mirairo yekucherechedza uye kuremekedza mazivo avo uye ruzivo rwakagadzirwa kuburikidza nehutano hwakanaka uye kuwana chimiro chakavimbiswa. Kuongororwa kweCISSP haisi nyore kuti iparadze; zvisinei, kana yakasunungurwa uye chiyeuchidzo chinowanikwa, chinozivikanwa seGold standard yeT IT kuchengetedzwa munyika yose.
Ivhareji yemari yeCISSP inyanzvi yakadzidziswa, maererano neGlobal Information Security Workforce Study (2015), iU US $ 103,117.
Zvikomborero zvekutora CISSP dzichibva kune imwe nzvimbo yakagamuchirwa yakadai seITS Tech School inopfuura zvakanyanya kunetseka uye kunetseka kwaungave iwe. Kana iwe uchida kutora basa rako mukuchengeteka kwemashoko kune imwe yepamusoro, CISSP ichakupa mapapiro!
Akabatana:Sei Makambani Anoda Vashandi Vakachengeteka uye Admins CEH Vavimbiswa?
CEH v10 Chii chitsva? Certified Ethical Hacker Certification v10 Yakabudiswa